Coinbase si ay u maalgeliso Hindida crypto iyo Web3 iyada oo ay jirto caddaynta sharciyeynta canshuuraha - Cryptocurrency Mining Rigs & GPU Miners Online
admin Lacagtii ugu dambeysay & Macdanta Crypto Crypto 0 April 4, 2022
Coinbase Ventures waxay ku qaban doontaa dhacdo qof ahaaneed gudaha Bengaluru si ay uga caawiso dardargelinta yoolalka ka mid noqoshada maaliyadeed ee Hindiya iyada oo loo marayo maalgashiga crypto iyo Web3.
Coinbase Ventures, waa cudud maalgashi oo Maraykan ah Crypto sarrifka Coinbase, la wadaago qorshe ay ku maal $1 million hindise cryptocurrency kala duwan iyo dadaallada Web3 via dhacdo qof-qof ah.
In a post blog la diyaariyey intii uu ku sugnaa Hindiya, madaxa shirkadda Coinbase Brian Armstrong ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda ganacsigu ay doonayso in ay ka faa'iidaysato hibada software-ka Hindiya ee tignoolajiyada crypto iyo Web3 oo ay gacan ka geysato dardargelinta yoolalka ka mid noqoshada dhaqaalaha iyo dhaqaalaha Hindiya.
U yeerida cryptopreneurs-ka Hindiya!
Coinbase Ventures ayaa iskaashi la leh @BuidlersTribe in lagu martigeliyo maalin garoon-qof ahaan gudaha Bangalore bisha Abriil.
$1M+ ayaa loo tartamayaa, oo ay ku jiraan $25k deeqaha gunnada ah ee ay bixiso @BeliefDAO, iyo fadhiyada latalinta ee maskaxda ugu fiican ee crypto.
- Coinbase (@coinbase) March 21, 2022
Jimcaha, maalinta qof ahaaneed ee garoonku waxaa lagu martigelin doonaa Bengaluru iyadoo lala kaashanayo Buidlers Tribe, kaas oo ay sii taageeri doonto Belief DAO si ay u bixiso deeqo gunno ah ilaa $25,000. Xiisaha sii kordheysa ee maalgashadayaasha ajnabiga ah ee booska crypto ee Hindiya waxaa loo aaneyn karaa caddaynta sharci ee dhawaanta keentay sharciga canshuurta crypto ee muranka dhaliyay.
Sharciga canshuurta crypto ee Hindiya wuxuu u baahan yahay, kaas oo ahaa mid wax ku ool ah ilaa Jimcihii, wuxuu u baahan yahay dhammaan Muwaadiniinta Hindiya inay bixiyaan 30% faa'iidooyinka crypto ee aan la xaqiijin cashuur ahaan. Intaa waxaa dheer, maal-gashadayaasha looma oggolaan doono inay dib u dhigaan khasaaraha crypto si ay u magdhabaan canshuurta.
Markii wax laga weydiiyay fikradda guud ee Web3 sida qashqasheeyaha, aasaasaha kooxda Buidlers Tribe Pareen Lathia ayaa u sheegtay Cointelegraph in ganacsatada Hindiya ay ku faraxsan yihiin inay shirkadahooda u qaataan caalami. Isagoo ka hadlaya saamaynta sharciga cusub ee cashuuraha ku leeyahay soo jiidashada maalgashiga shisheeye, Lathia ayaa shaaca ka qaaday in:
"Sharciga canshuurtu waa hal tallaabo oo wanaagsan. Tani waa isbeddel ku-meel-gaar ah, xeerarkuna waa la qabsan doonaa. "
Halka Wasiirka Maaliyadda Hindiya Nirmala Sitharaman ay hore ula wadaagtay ujeeddadeeda ah inay dib uga fikirto cashuurta crypto mustaqbalka dhow, gelitaanka Coinbase ee suuqa ayaa soo jiitay in ka badan 110 codsade.
1. Silsilad ⛓️
44% mashruuc ayaa lagu dhisayaa @XDayaannax
11% mashruuc ayaa lagu dhisayaa @xikmad
11% mashruuc ayaa lagu dhisayaa @solana
5 mashruuc waa silsilado badan! https://t.co/tofMDcr5pv
- Qabiilka Dhisayaasha (@BuidlersTribe) March 27, 2022
Sida laga soo xigtay Armstrong, Coinbase wuxuu hore u maalgeliyay $ 150 milyan shirkadaha Indian crypto iyo Web3 wuxuuna qorsheynayaa inuu fuulo 1,000 shaqaale ah Xarunta tignoolajiyada Hindiya ee Coinbase. Dejinta xeerarku waxay u adeegaan sidii martiqaad cad oo loogu talagalay maalgashiga shisheeye, iyadoo Armstrong uu ku daray:
"Hindiya waa meel sixir ah, waxaana aaminsanahay in crypto uu leeyahay mustaqbal weyn halkan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan gacan ka geysanno dhisitaanka mustaqbalkaas, dhacdadani waa tallaabo muhiim ah."
Armstrong ayaa weli safka hore kaga jira helista caddaynta sharci ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee Maraykanka. Sanadkii la soo dhaafay, Coinbase ka gudubtay caqabado badan oo sharciyeed oo ay soo saareen Congress-ka Mareykanka iyo Guddiga Securities and Exchange. Natiijo ahaan, shirkadda ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka ciyaarto wada-xaajoodyada sharciyeed ee ku saabsan crypto kaas oo ku qulqulaya adduunka oo dhan.
la xiriira: Dawlada Hindiya waxay isticmaashaa Polygon si ay u soo saarto shahaadooyin la xaqiijin karo
Dawlada gobolka Maharashtra ee Hindiya waxay bilowday adeegsiga tignoolajiyada blockchain ee Polygon si ay u soo saarto shahaadooyinka caste taasoo qayb ka ah ololaha Dijital ah ee India.
Dawlad goboleedka Maharashtra waxay iskaashi la samaysay LegitDoc si ay u soo saarto 65,000 shahaadooyinka caste si ay u caawiso habka bixinta qorshayaasha dawladda iyo faa'iidooyinka.
Madaxa Adeegga Maamulka Hindiya Shubham Gupta ayaa u sheegay Cointelegraph in dawladda Hindiya ay had iyo jeer ka feejigan tahay hirgelinta tignoolajiyada qaska ah ee gacan ka geysan kara dimuqraadiyaynta adeegyada muwaadiniinta:
"Web3 waxa ay fikradda dimuqraadiyaynta gaadhsiisa heer cusub, taas oo xogta/macluumaadka aan laga dhigi karin oo kaliya si cad oo la wadaago laakiin laga dhigi karo si cad oo aan been ahayn."
Iibso Nvidia Tesla v100 16GB Graphic Card €4,242.00
Iibso Goldshell Miner HS5 5400 GH s 2650W €7,450.80
Iibso MicroBT Whatsminer M31S+ (78TH/s) €4,704.00
Iibso ASIC buuqa yareeya aamusnaanta €226.80
Iibso Bitcoin Miner Generic AntMiner S9 13.5T €420.00
Tether (USDT)$ 1.00-0.04%
Dogecoin (DOGE)$ 0.067146-0.19%
Dai (DAI)$ 1.00-0.12%
Baraf (AVAX)$ 16.52-0.31%
Geesoolayaal (MATIC)$ 0.463920-5.36%
Xiddigle (XLM)$ 0.108763-0.32%
DHAGEYSO Protocol (XOG)$ 3.32-0.91%
Kala beddel (UNI)$ 4.93-0.58%
Wareejinta (LRC)$ 0.382227-0.05%